'फेयरमार्फत युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधीद्धारा फस्टहेण्ड सुचना दिलाउँछौं ' |
अन्तवार्ता शुक्रबार, २३ चैत, २०७४
'फेयरमार्फत युनिभर्सिटी तथा कलेजका प्रतिनिधीद्धारा फस्टहेण्ड सुचना दिलाउँछौं '
काठमाण्डौं । डेढ दशक देखि अष्ट्रेलिया अध्ययन गर्न चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक परामर्श तथा भिसा प्रक्रियाको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजले यहि चैत्र २२ गते देखि २६ गते सम्म देशका प्रमुख शहरहरुमा अष्ट्रेलियन एजुकेशन फेयरको आयोजना गरिरहेको छ ।
२२ गते बिहीबार इटहरीबाट शुरु भएको यस फेयर २३ गते विर्तामोड, २४ गते काठमाण्डौं, २५ गते पोखरा र २६ गते चितवनमा हुनेछ । यस पटकको फेयर पुतलीसडक स्थित एक्सपर्ट एजुकेसनकै कार्यालयमा हुनेछ । यस फेयरका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजका प्रबन्ध निर्देशक खेम संग्रौलासँग गरिएको कुराकानी
अष्ट्रेलियाका विभिन्न प्रतिष्ठित कलेज तथा युनिभर्सिटीका उच्च पदस्त अधिकारीहरु बाट एउटै छानामुनी छोटो समयमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी तथा परामर्श प्रदान गर्नु नै यस फेयरको मुख्य उद्देश्य हो । हामीले वर्षमा ४–५ वटा यस्ता फेयरहरु आयोजना गर्दैआइरहेका छौं ।
जसमा विद्यार्थीहरुको उत्साहजनक सहभागिता रहँदै आएको छ । फेयर मार्फत विद्यार्थीहरुले आवश्यकता अनुसारको परामर्श प्राप्त गरिरहेको हाम्रो विश्वास हो ।
अहिले सञ्चालन हुन गइरहेको फेयर जुलाई इन्टेकका लागि अष्ट्रेलिया पढन जाने विद्यार्थीहरुमा बढी केन्द्रित छ । जुलाई इन्टेकमा अष्ट्रेलिया जानका लागि अहिलेदेखि नै विविध पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । फेयरले विद्यार्थीहरुलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउँछ, । जसमार्फत विद्यार्थीहरुमा विश्वविद्यालय र कलेजहरुको छनौटबारे ज्ञान हुनुसँगसँगै उनीहरु पूर्वतयारीको अभ्यासमा जुट्छन् ।
पछिल्लो समय उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरि एजुकेशन सेमिनार दैनिक जसो भइरहेको देखिन्छ, यसरी सेमिनारहरु बढ्नुमा कन्सल्टेन्सीहरु बीचको प्रतिष्पर्धा हो या आवश्यकता ?
यस प्रकारका सेमिनारहरुमा सम्बन्धित देशका विभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीका उच्च तहका प्रतिनिधिहरुबाट प्रत्यक्ष परामर्श तथा जानकारी पाउन सकिने भएकोले यो अहिलेको आवश्यकता हो । समयसापेक्ष सहि सुचना पाउनु विद्यार्थी तथा अभिभावकको अधिकार हो भने तथ्यपरक जानकारी, उचित परामर्श र गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्नु हामी कन्सल्टेन्सीहरुको दायित्व हो । यस प्रकारका फेयरमा विद्यार्थीहरुको पनि क्रेज बढेको छ ।
वास्तवमा सेमिनार–गोष्ठि भन्नेकुरा विद्यार्थी तथा अभिभावकहरुलाई सूसुचित गराउने कुरा हो । विद्यार्थीहरुले जानुभन्दा अगाडि मेरो हैसियत के हो ? म कुन कलेजमा जान सक्छु या सक्दिन ? अष्ट्रेलिया गएपछि मेरो भविष्य कस्तो छ ? र फर्केर आएपछि आफ्नो करिअरलाई कसरी सुनिश्चित गर्नसक्छु ? भन्ने कुरालाई मार्गदर्शन गर्नेगरी यो सेमिनारको आयोजना गर्न लागिएको हो । यसबाट विद्यार्थीहरुले अधिकतम रुपमा फाइदा लिन सक्दछन् । विद्यार्थीले आफ्नो शैक्षिक तथा आर्थिक हैसियत अनुसार लक्षित कोर्स पढनका लागि लिनुपर्ने सम्पूर्ण जानकारी दिलाउनु यसको मुख्य उद्येश्य हो । ताकि कुनैपनि विद्यार्थीलाई पछि गएर कुनैप्रकारको अन्यौल नहोस भन्ने हो ।
अहिले हामिले गर्न लागेको सेमिनारमा १० वटा अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटि तथा कलेजहरुले सहभागिता जनाउँदैछन् । उहाँहरुले डिप्लोमा देखि मास्टर्स लेभलसम्म अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरुका लागि सुचना तथा जानकारी प्रदान गर्नुहुन्छ । परामर्शमा विगत २२ वर्ष देखि अष्ट्रेलियामै बस्दै आउनुभएका एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजका निर्देशक बदी अर्याल लगायतका टिम समेत रहने छ । उहाँहरुले अष्ट्रेलियामै दुई दशकभन्दा बढि काम गरेर बस्दाको अनुभव, आफु विद्यार्थी भएर जाँदाका समस्या, अहिलेको अवस्थाहरु बारे विद्यार्थीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ ।
अष्ट्रेलियाको शैक्षिक नीति नियमहरु प्राय परिवर्तन भैरहेका हुन्छन् । ती कुराहरुमा त हामि अपडेट हुन्छौं नै । हाम्रो मुख्य कार्यालयनै अष्ट्रेलियामा छ । कुनै पनि कुरा परिवर्तन हुने वित्तिकै त्यो हामिले जानकारी पाउछौं र भेटेर, फोनमा, इमेलमार्फत, सामाजिक सञ्जालबाट वा यस्तै सेमिनारहरुको आयोजना गरेर विद्यार्थीहरुमा यसप्रकारका सूचना तथा जानकारीहरु पु¥याउने गर्दछौं । यसप्रकारका सेमिनारहरुमा त झनै विस्तृतरुपमा हामिले होस वा अष्ट्रेलियन युनिभर्सिटिका प्रतिनिधिहरुले जानकारी गराउनुहुन्छ ।
शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुको भिड निकै बढेको छ । सहि र विश्वसनिय सुचना, परामर्श तथा भरपर्दो सेवाका लागि एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेज कसरी उपयुक्त विकल्प बन्नसक्छ ?
गत बर्षको तथ्यांक हेर्दा अष्ट्रेलियामा १३ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएका थिए । जसको १० प्रतिशतभन्दा बढि विद्यार्थीहरु एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजबाटै गएका छन् । यहाँबाट अप्लाई गरिएकामध्ये ९९ प्रतिशत विद्यार्थीहरुको भिजा लाग्ने गरेको छ । यीनै तथ्यांकहरुबाट पनि एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजको गुणस्तरियतालाई बुझ्न सकिन्छ । अहिले सम्म एक्सपर्ट मार्फत ३० हजार विद्यार्थीले सेवा लिइसकेका छन् । उनीहरु सबै आआफ्नो क्षेत्रमा सफल र खुशी छन् । उनीहरुको खुशी र सफलतानै हाम्रो रिवार्ड हो ।
यो सेमिनार प्लस टु सकेका देखि ब्याचलर वा मास्टर्स सकेर पिएचडि गर्न जान चाहने सम्मका विद्यार्थीहरुलाई लक्षित गरेर गरिएको हो । जुनकुनै लेभलका विद्यार्थीहरुपनि यसमा सहभागि हुन सक्दछन । यो सेमिनार निशुल्क हो ।
विद्यार्थीहरुले कुनैपनि कुरामा जस्तैः म अष्ट्रेलिया पढ्न जाँदैछु तर ममा यो कुराको अभाव छ, केहि कुरा अन्यौलमा छु बुझ्ने ठाउँ पाइरहेको छैन भन्ने लाग्दछ भने आउनुहोस हामि सेवाका लागि प्रतिबद्ध छौं । यो सहि ठाउँ हो । तपाई प्रकिया जहाँबाट पनि गर्नुस तर सूचना तथा जानकारीका लागि सेमिनारमा सहभागि हुन सक्नुहुनेछ । कुनैपनि सेवा लिनका लागि एक्सपर्ट एजुकेशन एण्ड भिजा सर्भिसेजमा विना हिच्किचाहट सम्पर्क गर्नुहोस भन्न चाहन्छु ।